Football Master 2019 5.4.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.4.2 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား Football Master 2019
Football Master 2019 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဘောလုံးမာစတာ 2019 ရောက်ရှိလာခဲ့ခဲ့သည်! ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှဘောလုံးမန်နေဂျာများအနေဖြင့်စိန်ခေါ်မှုများအပေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်!
အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသည့်မိုဘိုင်းဘောလုံးအသိုင်းအဝုိင်း join ။ သင့်ရဲ့ဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်လှပသောဂိမ်းပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့တိုက်ဖျက်မည်။ လိဂ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူရေးအဖွဲ့ထ!
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ MASTER အရှိဆုံး, ဆန်းသစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ပြင်းထန်သောအွန်လိုင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Up ကို Build, Scout, သင်တန်းမှတဆင့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကကမ္ဘာ့ဖလား-Class ချန်ပီယံမှခြစ်ရာမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကလပ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ Real-time ပြိုင်ပွဲများနှင့် World လိခ်ပါဝင်ကဒဏ္ဍာရီဘောလုံးမန်နေဂျာအဖြစ်သင့်ရဲ့ prodigy ဖန်တီးပါ။
သင့်ရဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Manager ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲမာစတာ 2019 နှင့်အတူယခု Start, သင့်မိုဘိုင်း device များအတွက်သီးသန့်လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ဘောလုံးကွင်းအချိန်မရွေး, နေရာမရွေးနထေိုငျ!
, အိပ်မက်သင်တန်း, ဖွေစျလာ:
•တရားဝင်လိုင်စင်: ဘောလုံးကွင်းရှေ့ဆောင် FIFPro ကနေအရာရှိတဦးကလိုင်စင်နှင့်အတူဥရောပတိုက်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ကလပ်နှင့်အတူယခုသင်လူကြိုက်များတိုက်စစ်မှူး, အသင်း, Full-ကျောဂိုးသမားလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းအဖွဲ့သို့ ... တစ်ခုမှာအိပ်မက် !!
Scout, ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်မှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှမရွေးသင့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောအကောင်းဆုံး XI အတူ Play ။ မှတ်ပုံတင်ရန် ... ရထား ... ဦးဝင်း ... ပြန်လုပ် !!
•ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D ကိုက်ညီမှုများ:
360 ဒီဂရီ 3D အားကစားကွင်းလေထု captivating အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၌သင်တို့၏ပထမဦးစွာ XI သက်သေခံ။ ပြီးပြည့်စုံသောဘောလုံးအိပ်မက်အသက်ရှင်နေထိုင် !!
•တရားဝင်ကလပ် Marks နှင့်နောက်ဆုံးအဖွဲ့ Kit:
သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် 2018-19 တရားဝင်ပစ္စည်းများ၌သင်တို့၏တစ်ခုလုံးကိုကစားသမားဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူသင့်ကိုယ်ပိုင်ကလပ်ကိုစိတ်တိုင်းကျများအတွက်တရားဝင်ကလပ် Marks ဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ, kill အဘို့အဝတ်စားဆင်ယင် !!
•စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် & ယှဉ်ပြိုင်လိခ်:
စူပါလိဂ်, မာစတာအဖွဲ့ချုပ်, Europa ချန်ပီယံရှစ်နှင့်စူပါကလပ်စိန်ခေါ်မှုများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂိမ်း Modes သာ၌သင်တို့၏အသင်းဦးဆောင်လမ်းပြ။ အားလုံးထဲက ... အားလုံးဂိမ်း ... အားလုံးရာသီ !!
•ကမ္ဘာ့ဖလား-Class ကို AI အစွမ်းဆောင်ရည်:
တစ်ခုလုံးကိုဘောလုံးအရေးယူမှုဦးဆောင်နှင့်အစွမ်းထက် AI အဂိမ်းအင်ဂျင်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောကျွမ်းကျင်မှု, စိတျလှုပျရှားစရာရည်မှန်းချက်များနှင့်အများဆုံးလက်တွေ့ကျကျ 'passes, လက်ဝါးကပ်တိုင်, dribbles နှင့် ယူ. ကတိပေးသဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော Gameplay ... တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန် .. အခါတိုင်း !!
•စိန်ခေါ်မှုကို Global ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမာစတာ:
သင်ကကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကနေအခြားမန်နေဂျာစိန်ခေါ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆုလာဘ်အနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာရန် ... အကျန် Beat !!
facebook.com/FootballMaster2019: အမေရိကန် LIKE
Us Follow: twitter.com/FMChain11
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ: In-ဂိမ်းချိန်ညှိခြင်းသွားသဖြင့် -> အမေးအဖြေများ
© Gala အားကစားနည်းပညာ, Ltd.
ဒီဂိမ်းထဲမှာဘောလုံးကစားသမားများပုံများနှင့်အမည်များကိုအသုံးပြုခြင်း FIFPro ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Enterprises BV ထံမှလိုင်စင်အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ FIFPro FIFPro ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Enterprises BV ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Football Master 2019 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Football Master 2019 အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Football Master 2019 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Football Master 2019 အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 8.17k 7.78M
Football Master 2019 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Football Master 2019 အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.4.2
ထုတ်လုပ်သူ GALA Sports
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.galasports.net/privacypolicy.html
App Name: Football Master 2019
File Size: 135.35MB
Release date: 2019-09-11 18:15:59
လက်မှတ် SHA1: B7:25:77:0C:C9:2F:2E:81:D9:F4:1F:9A:AA:F8:26:BA:47:F4:07:F0
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Limboworks
အဖွဲ့အစည်း (O): Limboworks
Football Master 2019 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ